I-NextMapping | I-NextMapping ™ - Lindela, Zulazula futhi wakhe ikusasa lomsebenzi
Okulandelayo™ - Lindela, Zulazula futhi wakhe ikusasa lomsebenzi
Incwadi ENTSHA “I-NextMapping ™ - Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi ”Manje ikhishwe futhi iyatholakala ku- Amazon.
I-NextMping ™ inikezela ngamathuluzi namasu okuzosheshisa wena nezinhlangano zakho amandla okuhola ikusasa lomsebenzi ngokwanda okusha, amandla okusebenza kanye nokuvumelana nezimo. Ngocwaningo olunzulu ngekusasa lomsebenzi, irekhodi elifakazelwe lokuphumelela kwamakhasimende kanye namashumi amabili eminyaka kokuba ngelinye lamabhizinisi aphezulu emhlabeni 'hamba' kubeluleki uCheryl Cran unikeza izimfihlo zokuguqula izinguquko eziphazamisayo zibe yithuba kanye nenzuzo. I-NextMapping ™ iyimodeli efakazelwe ebeka ngezinyathelo zokukusiza ukuphenya ikusasa ngokuqiniseka okukhulu emhlabeni ongazinzile futhi ongaqinisekile. Usebenzisa izimiso zohlobo lwe-NextMapping ™ uzofunda ukuthi ungalindela kanjani kalula, uzulazule futhi wakhe ikusasa lomsebenzi owenele kakhulu wena, amaqembu akho nenkampani yakho eholela enzuzweni enkulu yokuncintisana.
Amathrendi athinta ikusasa lomsebenzi kufaka phakathi isimilo nobuchwepheshe besintu
Ama-mindsets amathathu owadingayo ukuze ulungele ikusasa manje futhi ushintshe ukuqina
Ungazifunda kanjani izinguquko zokushintsha ukuze ucabange futhi ube ngaphambi kwamandla aphazamisayo
Ungayisebenzisa kanjani i-NextMapping™ imodeli yokwakha isiko elilungele ikusasa nenkampani
Hlela ukuphuma bese uhlela amasu wesikhathi esifushane naphakathi naphakathi ube ngamathuba okukhula
Ungagqugquzela kanjani abanye ukuthi bakhe kabusha ikusasa futhi 'bahole izinguquko' ukuze ufike lapho
Okumelwe Kufundwe Nanoma ngubani osebenzayo noma ohola ibhizinisi kuwo wonke amabanga
“Ngibe nethuba lokuzwa uCheryl Cran kwenye yezinkulumo zakhe ngonyaka owedlule, futhi le ncwadi iyinto elandelayo engcono kakhulu kunoma ngubani onentshisekelo ngekusasa lomsebenzi kanye nokuvela komhlaba wanamuhla osebenzayo uye ezweni lakusasa, namuhla. Le ncwadi kufanele ifundwe futhi ixoxwe yibo bonke abasebenzi nabaholi bebhizinisi kuwo wonke amazinga, ukuqonda ukuthi yini egqugquzela amasiko amasha asebenzayo (millennials kanye ne-Get-Z) nokuthi amasiko wefa angaxhumana kanjani futhi aguquke nalawo masiko azayo ukuze kufezeke okufanayo ngekusasa lomsebenzi. Incwadi kufanele ixoxwe emakolishi, kwiNamuhla Show, noma kuphi lapho kuxoxwa khona ngethemba nenqubekela phambili yekusasa lomsebenzi. ICheryl's Infographics ekugcineni kwesahluko ngasinye sale ncwadi isebenza ngentengo yokwamukelwa, kukodwa. Ubuchwepheshe, isimilo senhlalo, kanye nokusebenza kwengqondo kuhlangana ngamandla ekuchazeni kwakhe okunengqondo kwezemfundo nakokusebenzisekayo. ”
- UChester M. Lee, iKhasimende le-Amazon
Ikusasa lomsebenzi, ubuholi uqobo kanye nenhlangano kulapha!
“Incwadi enhle kakhulu kulesi sihloko sekusasa lomsebenzi.
UCheryl uhlinzeka ngezindaba eziningi kakhulu namathiphu asebenzayo okuthi uma ungafundi lokhu manje, ulahlekelwa yikusasa. Ukuba nguGen XI ngizizwa nginamandla futhi kusukela manje ngizoziphonsela inselelo yokuba nobuningi, ubuciko kanye nabantu bokuqala! Ngiyabonga uCheryl ngokubhala le ncwadi futhi wabelana nomhlaba ngekusasa lethu eliqhakazile. ”
- U-Alice Fung, iKhasimende le-Amazon
Igayidi enhle kakhulu yokuthi ungahlela futhi ulungiselele ikusasa lomsebenzi kanjani
“Njengomuntu osebenza ezimele, ngithole incwadi ethi NextMapping ukuba ibe ngumhlahlandlela omuhle kakhulu wokuhlela nokulungiselela ikusasa lomsebenzi. Ngidinga ukuba ngaphezulu kwamathrendi abumba ukuthi amabhizinisi asebenza kanjani. Le ncwadi ingifanele futhi ifike ngesikhathi kimi. ”
- UMichelle, iKhasimende le-Amazon
Ukuvula Amehlo Ngekusasa Lebhizinisi
“Le ncwadi yenza umsebenzi omangalisayo wokuqagela ikusasa futhi ihlinzeka ngezinyathelo ezingahle zenziwe futhi zikalwe ukuze zilungele ukuguquka kwesimo sebhizinisi. Ukubhalwa nemibono kuvezwa ngokusobala ngezindlela umfundi okhuthele wezincwadi zebhizinisi njengami angazazisa. Ngingancoma nakanjani uma ubheka ukuqhubeka phambili kwejika elisha. ”
- Keran S., iKhasimende le-Amazon
Ngiphefumulelwe amandla obuchwepheshe kanye nomthelela wawo omuhle.
“UCheryl unendlela eyingqayizivele neshukumisayo yokwabelana nothishanhloko abasezingeni eliphakeme nabahamba phambili abadlula ubuhlakani futhi baxhumane nezisusa zangaphakathi. Ngokushesha nje lapho ngifunda iSahluko 1 ngavuswa futhi ngagqugquzelwa ngamandla ezobuchwepheshe kanye nomthelela wazo omuhle. Ngithande kakhulu ama-infographics esahluko ngasinye enza kube lula ukubona ukuphindaphinda kwesahluko ngasinye shazi - okukhazimulayo! Le ncwadi ibheka ikusasa ngendlela ekhuthazayo nokuthi abaholi, amalungu eqembu nosomabhizinisi bangalakha kanjani ikusasa eliqhakazile. ”
- Teresia LaRocque, iKhasimende le-Amazon
Ngeke ufune ukubeka le ncwadi phansi.
“Ukuthola ikusasa labasebenzi kuyinselelo enkulu. Lokhu kufundwa okumnandi nokukhanyisayo. Ngiyincoma kakhulu le ncwadi kunoma ngubani ofuna ukukhula nokukhula endaweni yakhe. ”
- UChristine, iKhasimende le-Amazon
Hlela ikusasa lakho
“I-NextMapping kaCheryl Cran ikunikeza imininingwane enhle ngamathrendi abumba izindawo zomuntu siqu nezebhizinisi. Ngiyayithanda indlela asondeza ngayo nangaphandle. Amathrendi amakhulu, umthelela womuntu siqu. Ngiyincoma kakhulu le ncwadi! ”
- UShelle Rose Charvet, iKhasimende le-Amazon
“Noma ngingeyena usomabhizinisi noma umnikazi webhizinisi, le ncwadi ngiyithokozela kakhulu futhi iyangijabulisa. Kuhle ukufunda! Kunginikeza ngemibono emisha nokucabangisisa ngemvelo yebhizinisi esiseduze. Ngaphandle kokungabaza, nakanjani kuyinkomba ewusizo enezeluleko ezinhle zosomabhizinisi nabanikazi benkampani. Ngincoma kakhulu! ”
- Wyatt Sze, iKhasimende le-Amazon
“I-NextMapping ukubheka lapho ibhizinisi libheke khona emhlabeni lapho i-AI ne-robotics kudlala khona izindima ezikhulayo ebhizinisini. UCheryl Cran wethula umbono ngekusasa elikude kakhulu. Uxoxa ngokubaluleka kokuhlala uphezulu ocwaningweni ukuze ugcine ibhizinisi lakho libheke esikhathini esizayo esingalahlekile esikhathini esedlule. Isitayela sokubhala sikaCran sicacile futhi siyaheha. Ngikujabulele ukufunda le ncwadi futhi ngiyithole ifundisa kakhulu futhi ithakazelisa. Incwadi ibhalwe ngendlela ehlelekile neqondakalayo eyenza ukuthi ifundeke kalula futhi nemifanekiso namagrafu kungezwe kulokhu. Ngizithande kakhulu izigaba ekubikezeleni futhi ngiphonsela inselelo indlela ocabanga ngayo. Kufundwa okuthakazelisayo nokukhuthazayo. ”
- U-Emerson Rose Craig, iKhasimende le-Amazon
Kufanele Ufundele abaholi, amaqembu kanye nosomabhizinisi
“I-NextMapping kumele ifundelwe abaholi, amaqembu nosomabhizinisi ukuze balungele ikusasa, MANJE! Ngithole ukuthi le ncwadi inginikeza izinyathelo ezisebenzisekayo futhi bengiyithanda imodeli ye-PREDICT. Ngincoma kakhulu !! ”
- I-WomenSpeakersAssociation, iKhasimende le-Amazon
Ukuqinisekisa impumelelo esizayo
“Ukukwazi ukuzulazula nokusebenzisa ikusasa lomsebenzi kubalulekile empumelelweni yebhizinisi manje nangesikhathi esizayo, futhi i-NextMapping ikusiza ukwenza lokho Usebenzisa izibonelo zangempela zempilo, amathuluzi, kanye nezinkombandlela zezincwadi ukwehlukanisa ngokucacile izinyathelo okufanele uzithathe ukusebenzisa izitayela, nokulawula impumelelo yakho. Lokhu akukona nje kuphela kumarobhothi, i-AI, idatha nobuchwepheshe. Yincwadi ngabantu, amaqembu, amakhasimende namabhizinisi. Njengomxhumanisi wokuthengisa, ngithole ingxoxo esahlukweni esithi "Ikusasa Labiwe" inamandla amakhulu. Ukushintsha kwemicabango yomsebenzi, kudingeka indlela entsha yebhizinisi ezothinta abasebenzi bakho namakhasimende akho. Ngaphandle kwesikhundla sakho, imakethe yomsebenzi noma ibhizinisi, funda le ncwadi uma ufuna ukuqhubeka nokukhula eminyakeni embalwa ezayo! ”
- I-Colleen, iKhasimende le-Amazon
Ilungiselela ibhizinisi lakho ikusasa
“Umbhali wale ncwadi ubambelele ekutheni osomabhizinisi nosomabhizinisi kumele balungiselele manje ikusasa lomsebenzi njengoba lishintsha ngenxa ye-AI, ezishintshayo, amarobhothi kanye noshintsho olusheshayo. Lokhu kuzwakala kunengqondo: “I-NextMapping isiza ukuguqula ama-vison azayo abe izixazululo zokudala kanye nezinhlelo ezenzekayo… zamaklayenti ethu”. Inkampani yabeluleki be-NextMapping izothatha umzamo wokucwaninga ngamathrendi wesikhathi esizayo ngakho-ke ungazuza kulwazi lwabo olubalulekile. Umbhali ubheka ngokuningiliziwe umthelela amarobhothi asevele enawo emkhakheni wezokunakekelwa kwezempilo, owokukhiqiza, wezezimali nowokuthengisa. Uhlola indlela yokuphila nokukhetha umsebenzi okwenziwa ngabantu namuhla ukubikezela ukuthambekela kwekusasa. Ukuzivocavoca okuthakazelisayo nokufunda kahle. ”
- M. Hernandez, iKhasimende le-Amazon
Ukufundwa Okuthakazelisa Kakhulu
“Njengomnikazi webhizinisi elincane, ngihlale nginovalo olukhulu emcabangweni we-AI, ezishintshayo kanye namarobhothi, kodwa kukho konke ukuthembeka, ngicabanga ukuthi yinto okumele bonke abanikazi bamabhizinisi (babo bonke osayizi) badinga ukuyifunda, bayihlole futhi bazi ngempela maqondana nokuthi lezo zinzuzo zingathinta kanjani indawo yabo yebhizinisi. “I-NextMapping: Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi” ngokusobala nangokufishane ulichitha leli kusasa lezebhizinisi ngendlela evula amehlo ngempela futhi impela kumele lifundelwe wonke amabhizinisi, ngisho nalabo abathi abasoze faka amarobhothi, i-AI noma i-automation enkampanini yabo. Le ncwadi izoguqula umqondo wakho ekugcineni. ”
- U-Amy Koller, iKhasimende le-Amazon
Incwadi egcwele imininingwane ebalulekile
“Lokhu kufundwa okufishane impela kodwa kugcwele izeluleko namasu amahle osomabhizinisi, abanikazi bezinkampani nabaholi ukuzilungiselela ikusasa lebhizinisi futhi bahlale phambili kulo mdlalo ukuze baqhubeke baphumelele noma ibhizinisi selizenzela nje. Njengomuntu osebenza yedwa, ngibona sengathi le ncwadi izongisiza ngilungiselele kangcono futhi ngihlale ngisesikhathini nendlela amabhizinisi azoshintsha futhi akhule ngayo. Njengomuntu osebenzela inkampani encane Le ncwadi izongisiza ukuletha imininingwane ebalulekile etafuleni okuzosiza inkampani yethu ukuthi ikhule futhi kungisize nami ngikhule enkampanini. Ngibona sengathi le ncwadi kufanele ifundwe yinoma ngubani ozwa ukuthi ikusasa lebhizinisi lakhe lixhomeke ekuhlaleni kwamanje nasekuhleleni kusengaphambili ukuthi ibhizinisi lingakhula kuphi ngokulandelayo! ”
- UShanell, iKhasimende le-Amazon
Amarobhothi ayeza! Kepha lokho kungenzeka kungabi yinto embi…
“Ukuqhubekela phambili nje kwamarobhothi alawulwa yi-AI nesoftware kuyathakazelisa ngezindlela eziningi, kepha futhi kunezincazelo ezithile kanye nokusebenzisa okusebenzayo. I-Ai ingaguqula indlela esiphila ngayo eminyakeni eyishumi kuya kwengamashumi amabili ezayo, futhi njengoba sichitha ingxenye ebalulekile yezimpilo zethu sisebenza, izinguquko kungenzeka zibe nomthelela emakethe yezabasebenzi nasezindaweni zokusebenza.
Kulula ukunganaki nje inguquko yezobuchwepheshe njengento engenzeki kwamanye amashumi eminyaka, kepha iqiniso ukuthi, selivele liyenzeka futhi luthinta izimpilo zethu, kanye nokusebenza kwamabhizinisi amaningi. Abathengisi abaningi bama-DVD abakaze babone ukuthi iNetflix iza, futhi i-Uber akuselona nje igama elihlekisayo kubo bonke labo somatekisi abalahlekelwe yingxenye enkulu yemali yabo ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-smartphone. Noma ungumnikazi webhizinisi elincane noma uyi-CEO yenkampani enkulu, udinga ukuthi wazi izinguquko ezilethwe yi-AI bese uhlela ukwenza ezinye izinto ngokufanele uma usafuna ukuphumelela eminyakeni eyishumi edlule. ”
- UMfu Stephen R. Wilson, iKhasimende le-Amazon
Incwadi efundisa kakhulu!
"I-Nextmapping" incwadi enikeza ngamasu nemibono yokuthi ungabalungiselela kanjani abantu namabhizinisi ukujwayela ubuso obushintsha ngokushesha kobuhlakani bokuzenzela, i-automation, ne-robotics. Incwadi ihlelwe kahle kakhulu futhi kulula kumfundi ukuthi abone ukuthi umbhali unamava futhi uyasiqonda kahle isihloko. Umbhali uletha izibonelo eziningi zangempela zempilo nezifundo ezisizwayo ukusiza umfundi aqonde ukubaluleka okukhulu kokukwazi ukuzivumelanisa ngokushesha nezinguquko ezisheshayo kubuchwepheshe ezithinta zonke izici zempilo yethu. Engikuthanda kakhulu ngalencwadi yisichasiso sePREDICT esisiza umfundi ukuthi alindele ikusasa futhi ayilungiselele kangcono. Le ncwadi akuyona eyabaninimabhizinisi kuphela nabaholi bezinkampani abakhathazekile ngokwakha ibhizinisi elikwazi ukumelana nokushintsha kwezinkathi zonyaka. Le ncwadi futhi ifundisa kakhulu futhi izosiza noma ngubani ongafuni ukushiywa amagagasi ezinguquko kwezobuchwepheshe. ”
- U-Faith Lee, iKhasimende le-Amazon
Kwezethameli ezihlosiwe nezinto ezithokozisayo zabo bonke abafundi.
“Ukulandela ukuzihlangula okujwayelekile, le ncwadi ivula ngamagama mayelana nomlobi, Isingeniso nezingxenye ezintathu zomuntu ngamunye. INGXENYE YOKUQALA iqukethe izahluko ezi-2, Esokuqala sichaza ukuthi “Ikusasa LISEKHONA” bese sibuza ukuthi “Ingabe Ukulungele?” ngokwenqwaba yamarobhothi, ama-drones, i-AI nezinqubo zokucabanga eziguquke ngokuhlukile zabasebenzi abasha ozobhekana nabo. Isahluko Sesibili - "Ikusasa, Ukubikezela Ikusasa - Indlela Yokuqagela" ichaza lapho kufanele unqume khona ukuthi lezi zinto zizolithinta kanjani ibhizinisi lakho. INGXENYE YESIBILI iqukethe izahluko ezi-3 ezihlola “Ikusasa Lomsebenzi.” Eyokuqala (Isahluko Sesithathu) "I-Mindset ye-Navigator yeThe future of Work" ichaza ngqo ukuthi lokhu kuzodinga ukuba yini. Isahluko Sesine, “Ikusasa Labiwe” sichaza indlela imiqondo yabasebenzi abasha eyohluka ngayo kuleyo eyedlule edinga indlela entsha ngokuphelele. Eyesihlanu, ethi “Ukuzulazula Ezinselele Zanamuhla - Yini Okulandelayo” ihlola izinto ezikhona nezizayo. INGXENYE YESITHATHU iqukethe izahluko 6 no-7 ezichaza isidingo esiphelele sokwakha 'iSiko Lokwethembana' ngaphakathi kwabasebenzi ukubhekana nekusasa lomuntu neRobots, AI ne-Automation. Isahluko sokugcina sigcizelela i-NextMapping yokuthi "Yakha Ikusasa Lakho Lomsebenzi futhi Wabelana Ngekusasa Olenzayo". Uhlu lwezinsizakusebenza kanye ne-Index esiza kakhulu kuphetha incwadi
Ingxoxo: Lokhu kungenye yezincwadi eziningi kakhulu ezibonakala zisiza Abanikazi bamabhizinisi, ama-CEO's, ama-COO's et.al. ekubhekaneni nomthelela wezinto eziningi kangaka. I-Automation ithole ukunakwa okukhulu kakhulu kuze kube manje ngenxa yokwanda okushaqisayo kwedatha esivele iyinkinga enkulu futhi ekhulayo njalo ngezincwadi eziningana ezinikezelwe isidingo sokwandisa i-Cloud namathuba okusungula ama-Quantum Computers. Abambalwa bagxile entweni yomuntu siqu nasekubandakanyeni izici zobuntu bezizukulwane ezahlukahlukene. Lo mbhali uhlanganise okuningi kwalokhu kwamuva, okubonakala kufana kakhulu kunalokho engikufundile, futhi akachazanga nje kuphela umehluko wezimpawu zabangenayo abasha kulabo ababuyisela esikhundleni sabasebenzi, kodwa ubudlelwane babo nokukhula okusheshayo izindawo zamaRobhothi. AI kanye ezishintshayo. Njengakwezincwadi eziningi ezibhalwe ngabafundisi abajwayelekile, kunokuphindaphindwa okuningi okungashaywa indiva ngenxa yokusebenzisa kwayo 'ukwenza iphuzu'. Sekukonke, umnikelo ofanele kakhulu emfunekweni yolwazi olwengeziwe lwebhizinisi ukuze usinde kuleli zwe eliguquka ngokushesha. Okuletha umcabango othakazelisayo engqondweni yalo mfundi. Ukubhekwa njalo okuzodingeka kothile osesikhundleni esithile samandla ukuqinisekisa ukuthembeka kwengxenye ngayinye 'yamaqembu'. Njengoba amaqembu amasha ethatha izinqumo, munye kuphela umuntu ongazinikeli ongaletha imiphumela engadingeki okusikhumbuza isisho sakudala - Ikamela ihhashi elenziwe ikomidi. ”
- UJohn H. Manhold, iKhasimende le-Amazon
“Incwadi entsha kaCheryl ibalulekile ekufundeni kunoma yimuphi umuntu osebenza ngokuzimisela ozimisele ukuthatha izinyathelo nokwamukela ikusasa lomsebenzi. Isekelwa yimikhuba yakamuva nedatha ebalulekile yokuhlaziya ngokucophelela izinguquko ezingazelelwe ezithinta ikusasa lomsebenzi, le ncwadi iyithuluzi elibalulekile kunoma ngubani ofisa ukufunda ukulindela, nokuzulazula ikusasa ngempumelelo eyengeziwe. ”
- USebastian Siseles, VP International, Freelancer.com
“Njengengxenye yendima yakho njenge-CEO, kumele ukwazi ukuhola inhlangano yakho, noma ngabe isimo somnotho sinjani, ekubhekaneni noshintsho olusheshayo oluqhubekayo emphakathini nakwezobuchwepheshe, kanye nokuvuna imivuzo engaba khona. Incwadi kaCheryl inikeza isifundo esihle kakhulu ngezinhlangano zesikhathi esizayo okufanele zibheke phambili kuzo, iphinde inikeze amakhono adingekayo ukukhuthaza lezo zinguquko zesikhathi esizayo ezidingekayo enhlanganweni yakho. ”
- UWalter Foeman, uMabhalane Wedolobha, Idolobha LamaCoral Gables
“Sengimazi uCheryl Cran iminyaka eminingana futhi inkampani yethu isebenzisa ucwaningo lwayo ukuhlaziya ngokungaguquki uma sisebenza ngengqondo yansuku zonke egxile ekukhuleni nasekwakheni. Nge-NextMapping, uCheryl uhlinzeka umphakathi wamabhizinisi amathuluzi wokulungiselela izinhlangano zawo umhlaba wesikhathi esizayo lapho ukuziphatha nobuchwepheshe kuzohlangana khona ngezindlela akekho umuntu obekucatshangwa ukuthi nge-20 edlule. ”
- UJohn E. Moriarty, uMsunguli noMongameli, abeluleki be-e3GROUP
“I-NextMapping kumele ifundelwe abaholi nochwepheshe abasebenza kuzo zonke izimboni. Njengoba umhlaba womsebenzi uya ushesha futhi ungalindelekile, abantu nezinhlangano kufanele basheshe futhi bavumelane nezimo ukuze bahlale befanelekile. UCheryl unikeza amazwibela ekusasa lomsebenzi ngamathrendi nezibonelo ezisuselwa ocwaningweni futhi unikeza abafundi izeluleko ezisebenzayo zokwakha amakhono abucayi wezinguquko. ”
- U-Liz O'Connor, u-Principal Associate, Iqembu le-Daggerwing
“I-NextMapping iyaqinisa! Uma ungumholi webhizinisi ufuna amasu okuhambisa inhlangano yakho ezingeni elilandelayo, le ncwadi eyakho. Ngiyayithokozela indlela uCheryl akhulume ngayo ngokungagunci futhi ucwaningo lwakhe oluqhutshwa ngemininingwane lunikeza izilaleli zakhe ukuthembeka. ”
- UJosh Hveem, COO, OmniTel Communications
“UCheryl Cran uyisikhulumi nomlobi ohlaba umxhwele okhuthaza abaholi ukuthi babone ngale kwakusasa futhi akhuthaze abaholi ukuthi bahambisane nezinselelo zokufeza izinhloso zabo. I-NextMapping isebenzisa idatha efanele ukucacisa umkhombandlela futhi inikeze izeluleko ezisebenzayo zokwenza ikusasa libe ngokoqobo. Endaweni yomsebenzi neyenhlalo lapho ushintsho lushesha futhi nemithetho iyashintsha, lo mbono ocacile nendlela eya esikhathini esizayo somsebenzi akukaze kudingeke kangako. ”
- USuzanne Adnams, uVP Wocwaningo, uGartner
“Le ncwadi iwuhambo oluya esikhathini esizayo sebhizinisi nobuholi. Kungukuhlanganiswa okuhle kokuhlakanipha kwenhlangano nomsindisi webhizinisi onolwazi olujulile nokuqonda imvelo yomuntu nokuthi zisebenza kanjani izinto eziyinkimbinkimbi. Okumangazayo yindlela umbhali akhombisa ngayo ukungaguquguquki phakathi kwalokho akubhalayo nalokho ayikho. Ukwabelana ngemibono yakhe yokuthi angayakha kanjani isiko nenkampani elungele ikusasa afake indima yomholi wokuziphendukela kwemvelo okukhulunywe kahle futhi kuchazwe kahle encwadini. Umsebenzi wokuguqula umdlalo ozolethela umfundi ukucaciseleka okusha, ugqozi nesifiso sokwenza okuthile. ”
- UDanilo Simoni, uMsunguli kanye ne-CEO ye-BLOOM
“Uma kukhulunywa ngokuzulazula ngekusasa lomsebenzi, i-Nextmapping iyindlu yesibani. Kusisiza ukuthi sigweme izingqinamba ezinamadwala ezingabonakali ngenkathi sihlela inkambo eqonde ngqo ezindaweni zethu ezibandakanyekayo, nezindawo zokusebenza ezinhle. Ukungasebenzi akuyona inketho njengoba izinguquko zisizungezile - Umsebenzi kaCheryl unikeza wonke umholi ukuzethemba kokuzihola yena kanye nabanye. ”
- UChristine McLeod, Abaholi Bansuku Zonke, Umgqugquzeli Wobuholi & Nomeluleki
Ukubuka kuqala kwesahluko 1
UCheryl Cran wabelana ngesahluko 1 sencwadi yakhe entsha, ethi "NextMapping- Anticipate, Navigate and Create The future of Work" ezophuma ngoFebhuwari 2019.
Ukubuka kuqala kwesahluko 2
UCheryl Cran wabelana ngesihloko esisheshayo eSahlukweni 2. Imayelana nokuthi ungakusebenzisa kanjani ukuqashelwa kwamaphethini kanye namathrendi ekuziphatheni komuntu ukwenza ibalazwe elingcono nokuhlela ikusasa lakho njengomholi, ilungu leqembu, usomabhizinisi noma inhlangano.
Ukubuka kuqala kwesahluko 3
Kusahluko 3 kugxilwe ekuqondeni ikusasa nge-futurist kanye ne-mindset eningi. Amandla wokugcina imicabango kwangempela yamanje kanye nekusasa lokudala umphumela omusha esizayo.
Ukubuka kuqala kwesahluko 4
Isahluko 4 sigxile esikhathini esizayo okwabelwana ngaso, kwabelana ngomnotho kanye nobuholi okwabiwe. Ama-Millenials kanye noGen Z bafuna ukusebenza ezindaweni zokusebenzela ezabiwe nezingavulelekile.
Ukubuka kuqala kwesahluko 5
Kusahluko 5 kugxilwe ekuqondeni inselelo yenguquko yedijithali, ukuthola nokugcina abantu abalungile, nokuthi izinkampani zixazulula kanjani ezinye zezinselelo. Izinselelo zidinga izixazululo ezintsha nezisungulayo.
Ukubuka kuqala kwesahluko 6
Isahluko 6 imayelana nokwakha ushintsho oludingayo ukuze ube nesiko lokuthembela. Isidingo sabaholi sokwenza isiko elisobala lapho amaqembu angazizwa ephephile khona ukusungula, ukusebenzisana nokushintsha.
Ukubuka kuqala kwesahluko 7
Lesi sahluko sigxile ekusaseni lesintu kakhulu esikhathini samarobhothi, i-AI, ezokuzenzakalelayo kanye ne-robotic. Abasebenzi bafuna indawo enomiphefumulo eningi nenabantu. Lokhu kusho ukugxila kumakhasimende nakwisipiliyoni sabasebenzi njengokugxila okuphezulu kakhulu kubuchwepheshe obwesekelwa INDLELA esidala ngayo ulwazi lomuntu.
Ukubuka kuqala kwesahluko 8
UCheryl Cran uhlanganyela ukubuka kuqala kweSahluko 8 sencwadi yakhe entsha, i-NextMapping- Lindela, Zulazula futhi wakhe Ikusasa Lomsebenzi. Konke kuhlangana kubandakanya inqubo ye-NextMapping ukusiza abaholi, amaqembu nezinhlangano ukuba zilungele ikusasa manje.
UCheryl Cran uyikusasa le- #1 lokusebenzela umsebenzi, ongumeluleki ophezulu wezwe lonke futhi oqokwe njengomunye wezikhulumi zobuholi obuphezulu baseNyakatho Melika. Ungumbhali wezincwadi eziyisikhombisa kufaka, "Ubuciko Bokushintshwa Kobuholi - Ukushayela Ukuguqula Ezweni Elinabantu Abashesha Ukusebenza".
Ungumuntu ofuna ukubonisana esiza abaholi, amaqembu kanye nabosomabhizinisi ukusungula, ukukhulisa amandla agility futhi uhole ikusasa lomsebenzi ngejubane lenguquko. Umsebenzi wakhe uvezwe eWashington Post, Huff Post, Metro New York, Magazine Magazine, nokuningi.